သင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက် FEMCO CNC ခုံထောက်ပံ့ရေး - SEHO
FEMCO CNC ခုံ / ကျနော်တို့ 30 ကျော်နှစ်ပေါင်းသုံးစက်တွေရောင်းများ၏ဈေးကွက်မှာမတ်တပ်ရပ်ပါပြီ။ အသုံးပြုသောစက်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းနေဆဲတံတား Mills ကအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်ဖောက်သည်များအတွက်မတူကွဲပြားမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူကျေနပ်ဖို့ angular Mills ဌာနမှူးအမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။
FEMCO CNC ခုံ
Home အမျိုးအစား တပတ်ရစ်သတ္တုအလုပ်အဖွဲ့စက်များ တပတ်ရစ် CNC ခုံဖွင့်
အဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိတ်ဦးခေါင်းသည်သင်၏ထောင့်စက်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်မှ 90 ဒီဂရီ±0ကနေချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
FEMCO CNC တွင်ခုံ, နယူးနှင့်တပတ်ရစ်ထောက်ပံ့ရေး 33 ကျော်နှစ်များ - SEHO
SEHO INDUSTRY CO., LTD. 1995 ကတည်းကအသစ် FEMCO CNC ခုံတစ်ဦးပေးသွင်းသည်နှင့်ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် CNC စက်တွေ, ကြိတ်စက်နှင့်ကြိတ်အကြီးအကဲများ, နှင့်စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
VL-25M FEMCO CNC VERTICAL ခုံ
controller: FANUC 0iTF
မက်စ်။ လွှဲ DIA .: 3,000mm
မက်စ်။ ဖြတ်တောက်အမြင့်: 1,800mm
X ကို / Z ကိုဝင်ရိုးခရီးသွား: 1,650 / 1,150mm
crossrail ၏ဒေါင်လိုက်ခရီးသွား: 1,500mm
စားပွဲတင် DIA .: 2,700mm
မက်စ်။ စားပွဲပေါ်မှာဝန်: 20,000kgs
ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: 37 / 45kw 15 / 18.5kw
စားပွဲတင်မြန်နှုန်း: 160rpm (ဂီယာ)
ကို C ဝင်ရိုးနှင့်အတူ
X ကို / Z ကိုဝင်ရိုး boxway
OD tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ * 2
ID ကို tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ * 1
JOHNFORD5မျက်နှာ DMC